BugHerd: Ntuziaka, Pịa ma rụkọta ọrụ na Weebụ | Martech Zone
Nke a bụ ihe dị mma maka gị… gịnị ma ọ bụrụ na ịnwere ike iwebata usoro njikwa ọrụ gị na nkọwa ihuenyo ka ọ dị mfe ịkọwa okwu ma rụọ ọrụ na web? Enweghị nkesa ihuenyo, na-eche maka ụdị ihe nchọgharị, ma ọ bụ na-anwa ịkọwapụta okwu ndị mmadụ kọwara dị ka teknụzụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike imeghe ngwa nchọgharị, tụọ, pịa ma kpesa otu esemokwu na saịtị gị ozugbo na ndị ọrụ weebụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị?
Ugbu a ị nwere ike - na Uzoukwu. BugHerd na-enyere gị aka weghachite nzaghachi, dozie nsogbu, ma jikwaa ọrụ weebụ na-enweghị mbọ. BugHerd na-atụgharị nkọwa na saịtị ka ọ bụrụ mkpesa ahụhụ dị ike na data niile ịchọrọ iji dozie esemokwu ọ bụla. Ahụ n'anya ekwe:
Ndị a bụ ụfọdụ atụmatụ nke BugHerd
Direct njikọ na okwu - Chekwaa oge site na ịwụli elu gaa ebe esere nsogbu.
Njikọ faịlụ - Bulite faịlụ ndị ọzọ dị ka ụdịdị, ndekọ ma ọ bụ mockups.
Nhọrọ data zuru ezu - Nhọrọ zuru ezu maka nsogbu ndị a na-akọ, na-eme ka nsogbu na-enweghị nsogbu.
Ezigbo mkparịta ụka - Jiri ezigbo mkparịta ụka na-ekwurịta okwu.
Akpaka ihuenyo - ihe ndọtị ihe nchọgharị na-akpaghị aka itinye nseta ihuenyo.
Ndenye ederede - iji hazie na otu nzaghachi gị, okwu na atụmatụ arịrịọ.
Nchọgharị na OS - ederede mgbe edere nsogbu.
Ihuenyo na Mkpebi - Gbanwee nsogbu nsogbu na nha windo na mkpebi.
Mmekọrịta na Github, Ngalaba.io, JIRA, Basecamp na Ọkụ, Zendesk na Redmine
Tags: 37signalsBasecampebelebeFiregba egbemmekotaimewe mmekotaGitHubJiranjikwa ọrụRedmineNgalaba.ionjikwa ọrụweb imeweOnyebuchi
Ihe Nlekọta 200 na Google Algọridim
Jun 5, 2013 na 10:55 AM
BugHerd na-enyere gị aka weghachite nzaghachi, dozie nsogbu, ma jikwaa ọrụ weebụ na-enweghị mbọ.
Ọ na-eju m anya mgbe niile na ọtụtụ ngwa SaaS enwere n'oge ugbu a. Ọtụtụ akụkụ nke azụmahịa nwere obere enyemaka ha.
Jun 19, 2013 na 5:12 AM
Ọ bụrụ na ọ na-emezu nkwa ya, ọ bara uru ọnụahịa ahụ. You nweela ahụmịhe ọ bụla n'iji ya, Douglass?